दीपक नेपालका केही मुक्तकीय ट्रक्राहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका दीपक नेपालका केही मुक्तकीय ट्रक्राहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
दीपक नेपालका केही मुक्तकीय ट्रक्राहरूः
केहि नसोचि दाँयाबाँया यौवन फुकायौं तिमीले !!
दर्द छर्लङ्ग देखिन्थ्यो आँखामा लुकायौं तिमीले !!
देखेनन् देख्नेले नदेख्नेले चाल पाउदै पाएनन् !
दबाएर मन भित्र नै पिडा अश्रु सुकायौं तिमीले !!
मानव रूपी अजिंङगरको आहार बाट !
देश खोक्रो भैसक्यो भ्रष्टाचार बाट !!
बेथितिहरू पन्छ्याई देश विकास गर्ने !
आस छैन कुर्सी मोह सरकार बाट !!
दौडिरहन्छिन कसैको चिल्लो कारमा !
साझ पख सधै धाउछिन क्लब बारमा !!
बाध्यता होकि रहर उनी आफै जानुन !
दुई छाक खान किन बिकेकी हजारमा !!
बिपनिमा नभेटेता पनि सपनिमा हुनुपर्यो !
कसलाई कति गर्ने मायाको सिमा हुनुपर्यो !!
प्रयोग मात्र गर्न सिपालु यो दुनियाँमा अब !
घर गाडिको जस्तैः मायाको बिमा हुनुपर्यो !!
मध्य त्यो रातमा कोई रूदै थिए कोहि कराऊदै थिए !
जमात मान्छे लगातार एकोहोरो शंख बजाऊदै थिए !!
पहिरन सेतो छुवाछुत गर्न नहुने बुझिन मैले के भो के !
दूर दूर देखी आफन्तहरू सांत्वना दिन आऊदै थिए !!
मेसिनलाई झैँ निर्धारित तोकेको छ समय !
अरुकै अधीन अरुकै खटन हुन्छ सधैं भय !!
एकदिन नगए तीन दिनको तलब काट्छ !
हामी प्रबासिलाई यस्तै छ सजायको तय !!
पीडाले म रुँदा उनको आँसु झर्छ अरे !
बिलापमा भगवान को शरण पर्छ अरे !!
यो उनको म प्रतिको माया लाई देख्ने !
गाउँ शहरका मान्छेले डाहा गर्छ अरे !!
मलाई गरिबीले आज पठायो प्रबासमा !
सधैं न रुन न हाँस्नु बनायो प्रबासमा !!
जति काम गरेपनी थाकाई नबुझ्दा खेरि !
आमा हजुरको यादले सतायो प्रबासमा !!
दिनेछु बिश्वासको आधार तिमिलाई !
छलकपट रहित चोखो प्यार तिमिलाई !!
अरुले झैँ जनम दिन र उत्सवहरूमा !
दिन सक्दिन महंगो उपहार तिमिलाई !!
एक्सरेले पनि देख्दैन छ त्यति भित्र !
लुकाई राखेको छु सुन्दर तिम्रो चित्र !!
मेरा हरेक गल्तिमा पनि साथदिने !
तिमी हौं मेरो जिबनको असल मित्र !!
अग्रजहरू बाट धेरै कुरा सिक्नु छ !
यहीँ नेपाली साहित्यमा टिक्नु छ !!
कसैले सिकाउनुन साहित्य मलाई !
स्वार्थी दुनियाँमा सजिलै बिक्नु छ !!
दु:खमा पनि जिउन जानेको छु !
तिमीलाई नै आफ्नो ठानेको छु !!
जुनिभरी साथ दिन्छौं भन्नेमा !
तिमिमा पुर्ण बिश्वास मानेको छु !!
मरेर जिउछु पलपल तिमी बिना !
हुन्छ जिबनमा हलचल तिमी बिना !!
पागल झैं भैतारिदै हिड्छु होला !
हुनेछ गाउँ घर खलबल तिमी बिना !!
This entry was posted in कविता, मुक्तक and tagged Deepak, nepal, Pallawa, दीपक नेपाल, पल्लव. Bookmark the permalink.
← भ्रष्टाचार देश र नाट्यशाला